Dagaal Culus oo ka dhacay Degmada Qoryooley – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal Culus oo ka dhacay Degmada Qoryooley
Xalay fiidkii ayay aheyd markii degmada Qoryooley ee GobolkaShabeellaha Hoose ay weerar ku qaadeen Ururka Al-Shabaab,waxaana dagaal halkaasi ka dhacay faah faahin ka bixiyay Saraakisha ciidamada ee Maamulka degmadaasi Qoryooley.
Taliyaha Ciidamada degmada Qoryooley ayaa sheegay in weerar gaadmo ay ay kusoo qaadeen degmada Ururka Al-Shabaab,balse ay iska difaaceen,waxaana uu sheegay in dagaal kooban uu halkaasi kadhacay.
Waxa uu beeniyay warar soo baxayay oo sheegayay in dagaalkaas ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha degmada Qoryooley iyo isaga oo taliyaha ah,waxaana uu sheegay in dhammaantood ay yihiin kuwo caafimaad qaba,islamarkaana wararkaas aan waxba ka jirin.
Taliyaha oo la hadlayay Idaacadda Risaala ayaa waxa uu sheegay in saakay ay wadaan howlgallo ay ku baadi goobayaan raggii Shabaabka ka tirsanaa ee weerarka kusoo qaaday degmada Qoryooley,sidoo kalena ay ugu tegi doonaan halkii ay kasoo weerar tageen.
Degmada qoryooley ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay inta badan ka dhacaan weerarada ay geystaan Al-Shabaab oo ku sugan meelaan ka fogeen degmadaas,waxaana saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay horay u sheegeen inay ka saari doonaan.
Madaxda Dowladda Somalia oo ka shiraya go’aanka Dowladda Kenya (AKHRISO)